Madaxweynaha Galmudug oo koonfurta Gaalkacyo kula kulmay Saraakisha Galmudug (Sawiro) – Radio Daljir
Madaxweynaha Galmudug oo koonfurta Gaalkacyo kula kulmay Saraakisha Galmudug (Sawiro)
Oktoobar 18, 2018 11:58 b 0
Axmed Ducaale Gelle (Xaaf)Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug oomalmhan ku sugnaa koonfurta Magaaladda Gaalkcyo ayaa Maanta Booqday Saldhiga Ciidanka Booliska Galmudug halkaasi uu kula kulmay saraakiisha ciidamada amaanka Galmudug.
kormeerka Xaaf ee Xarumaha Ciidanka Amniga ayaa waxaa uu ahaa sidii saraakiisha ciidamada ula hadli lahaa xaalada ammaan ee degaanada Gobolka mudug.
Dhinacooda ciidamada ayaa Madaxweynaha uga warbixiyeey in xaalada ammaan hadda ay tahay mid wanaagsan islamarkana ciidamada ay u baahan yihiin gaadiiid ay ku shaqeyaan.
Xaaf Madaxweynaha Galmudug ayaa ciidamada ku amaanay sida ay u xaqiijiyeen amniga guud ee gobolka Mudug wuxuna balan qaaday in ka maamul ahaan ay wax ka qabanayan cabashada ciidamada.
Maxaa looga hadlay Shirkii Golaha wasiiradda Jubbaland? (Sawiro)